Video: Bulsho ka soo horjeedka Raadinta Burburka | Martech Zone
Fiidiyow: Bulsho ka soo horjeedka Raadinta Burburka
Talaado, September 10, 2013 Talaado, September 10, 2013 Douglas Karr
waxaan qabaa Xayeysiinta MDG ayaa isku dayay inuu naga dhigo qaar inaga mid ah inay tuuraan goomayaal markii aan aqrinay cinwaanka fiidiyowgan faafaahinta ah ee ay isla keeneen, Burburinta Bulshada iyo Raadinta: Dagaalkii Titans-ka Suuqgeynta Internetka. Laakiin, hoog, waxay ku soo noqdaan maskaxdooda dhamaadka fiidiyowga.
Markii aan bilawnay hay'addeena, warshadaha waxaa buux dhaafiyay hay'ado takhasus gaar ah leh. Xaqiiqdii, taladii ugu horreysay ee aan ka helo milkiile hay'ad waxay ahayd takhasus. Taasi waxay si toos ah uga soo horjeedday sababta saxda ah ee aan u bilaabay Highbridge - waxay ahayd sababtoo ah qof kastaa wuxuu ku dagaallamayaa miisaaniyadda midba midka kale oo cidina ma fiirinayn macmiilka. CMO la siiyay ayaa wicitaanada ka soo dirayay iibiyeyaasha Emailka, kuwa wax iibiya ee SEO, iibiyeyaasha Warbaahinta Bulshada… ha xusin iibiyeyaasha suuqgeynta dhaqanka. Dhammaantoodna waxay keeneen tirooyinka miiska si ay u taageeraan sababta aad wax badan ula qaadanaysid.
Istaraatijiyadaha suuq geynta dijitaalka ee sida ugu fiican u shaqeynaya maahan oo ay kasoo horjeeddo, dhammaantood waa inay wada shaqeeyaan. E-mayl qaatayaasha ayaa soo noqonaya kuna mashquulsan bulsho ahaan, warbaahinta bulshada oo dhalisa wadahadal khadka tooska ah oo dhaliya xigashooyin iyo gadaal xiriiriyayaal, kuwaas oo iyaguna hagaajinaya darajadaada. Markaa darajadaada ku jirta ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah waxay ka horreeyaan dadka waawayn ee baaraya oo diyaar u ah inay iibsadaan. Su'aashu ma ahan midka ay tahay inaad isticmaasho, laakiin waa sidee inaad mid walba u hubiso una isticmaasho.
Waxaad igu dhowdahay inaad i hesho MDG! Shaqo wacan.
Tags: mdgxayeysiis mdgmdgadvertisingSuuq Goobidraadinta bulshadasuuq-geynta suuqaMedia Social Suuq
Sida SEO / SEM been abuur ah oo loogu talagalay shirkad ganacsi oo ganacsi, waxaan jeclaan lahaa inaan labadaba ka faa'iideysto. Bulshada iyo Raadintu way koobsanayaan, marka waxaan ku raacsanahay inay is barbar socdaan si ay u farsameeyaan istiraatiijiyad suuqgeyn raadin oo wanaagsan.